China Salmonella Test mpanamboatra sy mpamatsy | Liming Bio
Ny fahatsapana avo (89.8%), ny fahaizany manokana (96,3%) dia voaporofo tamin'ny alàlan'ny fitsapana ara-pitsaboana 1047 miaraka amin'ny fifanarahana 93,6% raha oharina amin'ny fomba kolontsaina.
Dingana iray dingana, tsy mila fahaizana manokana.
10 minitra fotsiny no ilaina.
Kit Size = fitsapana 20
File: Manuals / MSDS
Salmonella dia bakteria iray izay miteraka iray amin'ireo enterika mahazatra indrindra aretina (tsinay) eran'izao tontolo izao- Salmonellosis. Ary iray amin'ireo lehibe indrindra koany aretina azo avy amin'ny bakteria mahazatra dia voalaza (matetika tsy dia matetika loatra noho ny Aretina Campylobacter). Theobald Smith, dia nahita ny tsiranoka voalohany an'ny Salmonella – Salmonella cholerae suis – tamin'ny taona 1885. Hatramin'io fotoana io, ny isan'ny tady (antsoina hoe teknika serotypes na serovars) an'ny Salmonella fantatra fa miteraka salmonellosis nitombo 2.300 mahery. Salmonella typhi, ny aretina miteraka tazo typhoid,dia mahazatra any amin'ny firenena an-dàlam-pandrosoana izay misy fiantraikany amin'ny olona 12,5 tapitrisa isan-taona, Salmonella enterica serotype Typhimurium sy Salmonella enterica serotype Enteritidis koa dia aretina mitatitra matetika. Salmonella mety hiterakakarazana aretina telo samihafa: gastroenteritis, tazo typhoid, ary bakteria. Ny fitiliana ny Salmonellosis dia misy fitokanana ny bacilli sy ny fampisehoana antikôria. Mandany fotoana be ny fitokanana ny bacilliary ny famaritana antibody dia tsy tena voafaritra tsara.
Ny Salmonella Antigen Rapid Test dia mamantatra an'i Salmonella amin'ny alàlan'ny fahitana fandikana ny fivoaran'ny loko eo amin'ny tsipika anatiny. Anti-Salmonellany antibodies dia tsy mihetsika amin'ny faritra fitsapana ny membrane. Nandritra ny fitsapana, nyny santionany dia mihetsika miaraka amin'ireo anti-salmonella anti-salmonella mifangaro amin'ny sombin-loko ary efa nialoha lalana teo amin'ny pad conjugate ny fitsapana. Mifindra ny fifangaroana avy eoamin'ny alàlan'ny membrane amin'ny alàlan'ny hetsika capillary ary mifandray amin'ny reagents amin'ny manify. Raha misy salmonella ampy ao amin'ny santionany, dia misy tarika milokoendrika amin'ny faritra fitsapana ny membrane. Ny fisian'ity tarika miloko itymanondro vokatra tsara, raha toa kosa ny tsy fisiany manondro vokatra ratsy. Theny fisehoan'ny tarika miloko amin'ny faritry ny fibaikoana dia toy ny fanaraha-maso ny fomba fiasa, manondro fa ny habetsaky ny santionany dia nampiana sy ny membrane nitranga ny wicking.
Previous: Fitsapana Rotavirus
Manaraka: Fitsapana Vibrio cholerae O1
Fitsapana haingana an'ny Salmonella Antigen
Fitsapana haingana momba ny Coronavirus Ket, H. Pylori Ag Rapid Test dia mamantatra ny antigen, Kitapo fitsapana Igm / Iggrapid, Coronavirus ho an'ny fitsapana Covid-19, Kitapo fitsapana antigona Coronavirus, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Fitsapana haingana,